China BEULINES Cross Yakabatanidzwa HA Dermal Filler Gels fekitori uye vagadziri | Beulines
BEULINES Cross-Yakabatanidzwa hyaluronic acid dermal filler yakasarudzika yakasimbiswa hyaluronic acid isiri yemhuka mavambo. Iyi jekiseni hyaluronic acid inonyanya kushandiswa kubvisa mitsara yakanaka uye makwinya akatenderedza maziso, huma, nzvimbo dzemuromo; kuveza chimiro chechiso; kusimudzira vhorumu yeshaya kana matama; kuwedzera zamu uye garo, nezvimwe. Chinhu chimwe chete chekushandisa.BEULINES yakanyatso kuisirwa mu hyaluronic acid yekuzadza indasitiri kwemakore.
1, Mutengo: BEULINES
2, Kurongeka: 24mg / ml yakagadzikana hyaluronic acid
3, Chinyorwa Chekutanga: Zvinyorwa zvepamusoro zvakagadzirwa muChina
4, Muchinjikwa-Akabatana mumiririri: BDDE
5, Huwandu hweSingano / Chidimbu: 2 tsono
6, pasherufu hupenyu: 3 makore
Shandisa Nzvimbo uye Rinoshanda:
BEULINES dermal filler inosanganisira mana mamodheru, ivo vari Yakanaka, Derm, Yakadzika, Subskin.Mhando dzakasiyana dze dermal fillers dzinoitirwa kurapa zviratidzo zvakasiyana zvekukwegura.
BEUFILLER dermal filler inosanganisira mana mamodheru, iwo Derm, Derm Yakadzika, Derm Plus, Meso.
Type Derm Derm Yakadzika Derm Uyezve Meso
Vhoriyamu sirinji 1ml / 2ml 1ml / 2ml 10ml / 20ml 1ml
Mashoko Muchinjikwa-wakabatanidzwa HA Muchinjikwa-wakabatanidzwa HA Muchinjikwa-wakabatanidzwa HA Asina Muchinjikwa-wakabatanidzwa HA
HA kusangana 24mg / Rine mamiririta 24mg / Rine mamiririta 20mg / Rine mamiririta 15mg / Rine mamiririta
Kukura kweparticle 0.15mm-0.28mm 0.28mm-0.5mm 0.5mm-1.25mm Hapana
Nhamba inofungidzirwa yeiyo gel particles ml 100000 10000 5000 Hapana
Yakashandiswa 27G 30G Kwete kupihwa ine sirinji, Meso pfuti kana derma roller
Kwokupinza jekiseni Pakati chikamu che dermis Yakadzika yakaturikidzana yedermis uye / yepamusoro peiyo subcutis Chikamu chepamusoro che dermis pamusoro kana pakati peganda
Zviratidzo zvinokurudzirwa Wakaenzana makwinya Yakadzika kumeso kuunyana uye kupeta Makuru akadzika wirnkles uye akapeta Mutsetse Wakanaka Kuderedza
Kurapa Glabellar mitsara, Kubvarura gomba, Nasolabial folds, Nasolabial groove, Oral commissures Rhinoplasty, Mhuno, Kuvandudza miromo, Chin kuwedzera, Cheeks padding, Cheek kuwedzera Kukura kwemazamu,
Matako kuwedzera Ganda Rejuvenation, Ganda kujekesa, Ganda Kuchena, Ganda Mvura, Fine Line Kuderedza
Nguva 6-18mwedzi 6-24months 9-24months 2-6months
Sirinji imwe uye tsono mbiri dzeBD mune PVC Blister, Imwe Blister uye kuraira mubhokisi rekutengesa.
1,20 makore nhoroondo
Fekitori yedu ine makore makumi maviri ekugadzira ekutsanangudza pane hyaluronic acid dermal filler, uye ine makore anopfuura gumi zviitiko paoem.we tine hunyanzvi dhizaini dhizaini kuti ikubatsire iwe kugadzirisa yako logo, yako kurongedza, ita yako pfungwa yekuvandudza yako wega mhando pesheni, MOQ Yekugadzirisa sevhisi ingori makumi mashanu pcs. tinogamuchirwa kutishanyira!
Iyi semusangano ndeyekirasi zviuru gumi zvemusangano yekirasi yechitatu yekurapa michina, isu tine yekupedzisira sterilization tekinoroji uye yakasimba solid kudzora system, Iyo sodium hyaluronate gel inoomeswa neakanyanya kumanikidza mweya, uye iyo tsono yakaomeswa nemagamma mwaranzi. Kugadzirira kuri aseptic uye pyrogen-isina, iyo inovimbisa kuchengetedzeka uye mhando yepamusoro yezvigadzirwa pasina kusvibiswa.
Iyo kambani yakatumira epamberi zvigadzirwa zvekugadzira zvinotengeswa kubva kuEurope nyika, senge Automatic vacuum yekuzadza uye yekumisa muchina kubva kuGerman OPTIMA, maviri-masuo kabhineti mhando sterilizer kubva kuSweden GETINGE, Agilent HPLC, UV, Shimadzu GC, Malvern rheometer, nezvimwe.
Mubvunzo: HA yakasvibiswa sei mumuviri?
A: Mahara radicals anokonzeresa mabhureki ayo anosunungura HA maketani.
Mubvunzo: Hyaluronidases mukati uye mumasero anoshatisa akasunungurwa HA maketani
A: Zvikamu zvidiki zvinogona kusiya muviri uine weti.
Mubvunzo: Beufiller gel inoshoreka sei mumuviri?
A: Kana maketani asunungurwa vanotevera nzira imwecheteyo seyakajairwa HA.
Mubvunzo: Muviri unogona kudzikisira huwandu hukuru hwe HA yekuzadza-gel rinojowa kurapwa kwemuviri?
A: Ehe! Huwandu hwe HA hunoshatiswa uye hunobviswa zuva rega rega kubva pakuisirwa hauna basa kana uchienzaniswa neuyo unowanzo kudzikiswa mumuviri.
Mubvunzo: Zvakadiniko neBDDE?
A: Iyo mwero wekusara kweBDDE yakaderera kwazvo muchigadzirwa chekupedzisira. Iyo dosi iri pazasi peiyo inonzi yakachengeteka nemirayiridzo.
Zvadaro: BEUFILLER hyaluronic asidhi Lip Filler
Yakanakisa Dermal Kuzadza Kwemacheko
Yakanakisa Dermal Filler YeJawline
Yakanakisa Dermal Kuzadza Yekubvarura Musodzi
Yakanakisa Dermal Kuzadza Kune Pasi PeMaziso
BEUFILLER Muchinjikwa-wakabatana Hyaluronic Acid Dermal F ...